Xildhibaan C/llaahi Max'ed Nuur oo sheegay inuu ka bad-baaday weerarka NISA - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaan C/llaahi Max’ed Nuur oo sheegay inuu ka bad-baaday weerarka NISA
Xildhibaan C/llaahi Max’ed Nuur oo sheegay inuu ka bad-baaday weerarka NISA
Muqdisho (Caasimada Online) – War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho ay isku rasaaseeyen ciidamo ka tirsan NISA iyo Ilaalo la soctay Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan golaha Shacabka.
Is rasaaseynta ayaa la sheegay inay bilaabeen ciidamada NISA oo ka shakiyay gaari nooca aan xabadda Karin oo uu la socday Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur kaa oo xoog ku jiiray barkoontarool oo ciidamada NISA ay ku baarayeen gaadiidka.
Ciidamada NISA oo isku dayay inay baaraan Gaariga ayuu isku dayay inuu awood ku maro ciidamada waxaana sidaa isku rasaaseeyay ciidamadii ku sugnaa koontaroolka lagu baaraayay gaadiidka iyo ilaalada Xildhibaanka.
Is rasaaseynta ayaa ka dhacday halka loo yaqaan Isgooska Viat, iyadoo ciidamada NISA ay markii danbe ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan Gaariga uu la socday Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan golaha Shacabka
Sidoo kale, is rasaaseynta ayaan ka dhalan wax khasaaro ah sida aan wararka ku helnay,weli xildhibaanka kama hadlin dhacdadaas.
Xildhibaanka oo ka mid ah kooxda Qabyo ayaa qoraalo lagu baahiyey baraha bulshada ku sheegay in NISA ay si cad u weerareen markii uu isku sheegay, balse uu ka bad-baaday.
Si kastaba ha ahaatee amarada lagu xaqiijinaayo Amniga Magaalada Muqdisho ayaa waxaa caqabad ku ah Ilaalada Wasiirada iyo Xildhibaanada baarlamaanka oo aan u nugleen awaamirta.